I-101 YEETATTOOS ZOSAPHO EZIBALASELEYO EMADODENI: UYILO OLUNENTSINGISELO + IMIBONO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 Iitattoo zoSapho eziBalaseleyo kuMadoda
Iitattoo zosapho zezinye zezona ntlobo ziceliweyo zobugcisa bomzimba. Ngapha koko, ezi ntlobo zeetato zithandwa kakhulu emadodeni kuba zinokubonisa ubudlelwane obusondeleyo nosapho…
Iitattoo zosapho zezinye zezona ntlobo ziceliweyo zobugcisa bomzimba. Ngapha koko, ezi ntlobo zeetatto zithandwa kakhulu ngabantu kuba zinokufuzisela ubudlelwane obusondeleyo kunye namalungu osapho. Umzekelo, iitattoos kunye neesimboli ezimele usapho zinokukhumbula ukuzalwa komntwana, zibonisa isikhumbuzo esibalulekileyo, okanye zide zikhumbule ukufa kothandekayo.
Olunye lwezona zilo zihle kakhulu zetattoo yosapho zisebenzisa iikowuti zoSapho lokuQala, uSapho luNaphakade, kunye noSapho kuyo yonke into ngelixa abanye bebhala amagama, iinyawo, abazali bebambene ngezandla nabantwana babo, okanye umthi wosapho. Enye into oyithandayo kukufumana amagama abantwana bakho abhalwe kuwe isifuba , kufutshane nentliziyo yakho.
Ngokufanayo, i ingalo , ingalo , Isandla kunye nesihlahla kukubekwa okubonakalayo okuyakuthi kubonise ukuzinikela kwakho. Abafana banokwenza ngokwezifiso ubugcisa babo kwaye bongeze iintliziyo, iintyatyambo, ikratshi lengonyama, ukuprintwa kwezandla, imizobo yesizwe, i-ankile, okanye ikhampasi. Amagcisa anetalente ekhethekileyo anokuphinda enze imifanekiso yobomi.
Ekugqibeleni, zininzi izimvo zetattoo yosapho, nganye nganye ibonisa umyalezo owahlukileyo obonisa intlonipho, uthando, umanyano, ukuthembeka, ukomelela kunye nokuzincama. Ezona tattoos zosapho zinentsingiselo zikhethekileyo kwaye zibalulekile kuwe kuba intsingiselo yazo inovakalelo, iswiti, kwaye yahlukile.
Apha ngezantsi, sidibanise ii-tattoos zosapho ezipholileyo zabafana. Nokuba ujonge ukufumana umkhono wosapho, isifuba , ingalo, ingalo isihlahla, isandla , okanye umvambo ongasemva , Nazi iitatoo zosapho ezili-101 eziphambili zokufumana.
eyona ndlela idumileyo yokucheba iinwele zamadoda
1Eyona Mibono yeTatoo yoSapho
1.1IiTattoos zoMthi woSapho
1.3IiTattoos zegama loSapho
1.4IiTattoos zeNtliziyo yoSapho
MbiniApho unokufumana khona iiTattoos zoSapho
3Uyilo lweTatoo yoSapho ePholileyo yaBafundi
Eyona Mibono yeTatoo yoSapho
Zininzi iintlobo zeetattoos zosapho, kwaye ngelixa ezinye ziqhelekile, ezinye zinokuphantse zahluke ngokupheleleyo. Ngenxa yentsingiselo enzulu ye tattoo yosapho, kubalulekile ukutyala ixesha kunye namandla ukuyenza ifezeke. Kwaye nangona uyilo lwe tattoo losapho oludumileyo luhlala lubandakanya iikowuti kunye namagama, amadoda anethuba lokuhlonipha abathandekayo babo ngendlela ekhethekileyo.
IiTattoos zoMthi woSapho
I-tattoo yomthi wosapho inika abafana indlela efanelekileyo kunye nemvakalelo yokuhlonipha ookhokho babo. Ukusuka koomakhulu nootatomkhulu bakho ukuya kubazali bakho, oomalume, oomalume, oomalume, abantakwenu kunye nabantwana, umvambo wosapho onamagama yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhumbula amalungu adlulileyo nawangoku, ahlawule, kwaye abonise uthando olungenamiqathango.
Ngokwesiqhelo, ii-tattoos zomthi wosapho zibandakanya umthi kunye namagama, kodwa ungasoloko ukhetha ukongeza kwiinkcukacha ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kuxhomekeke apho ufuna i-inki. Umzekelo, ingxelo encinci nelula inokubandakanya ii-inishiyali okanye nje imihla yokuzalwa kwezihlobo zakho.
Ngelixa uninzi lwee-tattoos zosapho zijolise kumabinzana anje ngoSapho lokuQala, iGazi liXinene kunamanzi, uSapho luNaphakade, uSapho ngaphezulu kwayo yonke into, uPistol kaTata omncinci kunye nokuKhanya koBomi baM, abanye abantu bakhetha ukwenza i-inki intetho edumileyo, iivesi zeBhayibhile okanye imiyalezo emide.
Kwinqanaba layo, isicatshulwa somxholo senzelwe ukuhambisa ifilosofi yobomi-inkqubo yenkolelo enxulumene nendlela ofuna ukuhlala ngayo ubomi bakho. Nokuba isicatshulwa esilula malunga nosapho singabonisa ukuzinikela kwakho, ukuzinikela, kunye nokuthembeka kumalungu othandekayo.
IiTattoos zegama loSapho
Iitattoos zamagama osapho aziphelelwa lixesha kwaye zinemfashini, kwaye uyilo lunokwahluka ngokuxhomekeka kwindlela elula okanye enzima ongathanda ngayo umsebenzi wobugcisa. Umzekelo, uninzi lwabantu luyaluthanda uphawu lokugqibela emva kwabo.
Abanye banokukhetha okunamandla kwiitattoo zamadoda ezinamagama osapho kuzo, ukuvumela umzobi wakho ukuba afake imifanekiso eyongezelelekileyo enentsingiselo kubugcisa bomzimba wakho. Ngamagama angenakubalwa amagama e tattoo, ungadibanisa amagama osapho lwakho kulo naluphi na uhlobo lweinki.
isixhobo sokubala sokuhambelana nokuvumisa ngeenkwenkwezi
IiTattoos zeNtliziyo yoSapho
I tattoo yentliziyo yosapho inokuluveza uthando. Njengophawu lwendalo iphela lothando, imfesane kunye nobomi, uyilo lwentliziyo-yindlela elula kwaye elula yokubhiyozela usapho. Ngokukwanjalo, abafana banokufumana i-3D okanye i-biomechanical tattoo tattoo esifubeni sabo enamagama amalungu abo osapho aqoshwe.
Apho unokufumana khona iiTattoos zoSapho
Inxalenye yokukhetha itattoo yosapho ithatha isigqibo sokuba ungayifumana phi, kwaye oku kuxhomekeke kwinani lezinto ezinje ngobungakanani, imilo, umbala, kunye nesitayile. I-tattoo yegama elifutshane njengoSapho inokufakwa i-inki ngokulula naphi na, nokuba ukhetha ukuba mkhulu okanye mncinci kangakanani.
Ukuba injongo yakho ibandakanya ukongeza amagama amalungu osapho kwi tattoo enye, kuya kufuneka uqiniseke ukuba unendawo eyaneleyo emzimbeni wakho yokwenza oko. Iitatoo zangaphambili zentsapho zilungele izimvo ezincinci nezilula ezinje ngesicatshulwa esifutshane okanye intliziyo encinci enamagama omfazi wakho kunye nomntwana. Ngokufanayo, unokukhetha uphawu olungapheliyo esihlahleni sakho, isandla okanye umnwe.
Kwelinye icala, ukuba ufuna umthi wookhokho obhalwe i-inki emzimbeni wakho, okanye uyilo oludinga iseyile enkulu, singacebisa itattoo yesifuba. Usapho lokuqala kunye nosapho ngaphezulu kwayo yonke into iitatoo zesifuba zihlala zithandwa kakhulu, kunye namagama, iinyawo zosana, iiroses kunye nemizobo yesizwe.
Olunye uqwalaselo kukuba uza kuyongeza kwi tattoo kwikamva. Ukufumana itattoo yosapho emva kokuba umntwana wakho wokuqala ezelwe kunokuba ngumbono omangalisayo, kodwa ukuba ufuna ukongeza imihla, amagama okanye ukushicilelwa kwezandla zabantwana bexesha elizayo emva kwendlela, kuya kufuneka ukhethe indawo ebonelela ngendawo eyoneleyo yokwenza oko kanye .
Phantse nayiphi na indawo yomzimba iya kwanela, kodwa uninzi lwamadoda luya kukhetha indawo ezinjengengalo kunye nomkhono wokubonakala okuphezulu. Njengokuba kunjalo, sincoma kakhulu ukuba ufumane umkhono we tattoo yosapho. Nokuba ufuna umkhono opheleleyo okanye onesiqingatha ukuwe, kodwa nayiphi na itattoo engalweni iya kuhlala ikukhumbuza ngokubaluleka kosapho.
Uyilo lweTatoo yoSapho ePholileyo yaBafundi
Ukuba unomdla wokujonga ngakumbi ii-tattoos zamadoda aphezulu, jonga imifanekiso yethu oyithandayo engezantsi. Khumbula nje ukuba zininzi iisimboli ezahlukeneyo ezimele usapho, ke jolisa ekufumaneni izinto ezinentsingiselo ekhethekileyo kuwe kunye nokwenza uyilo lube lodwa kusapho lwakho.
ukuvumisa ngeenkwenkwezi iimpawu zelanga nenyanga
iinwele zeenwele zamadoda eenwele
ukufunda itshathi yokuzalwa
yintoni uphawu lwam lwenyanga nelanga
iinwele zamakhwenkwe aneenwele ezinde
Iingcamango ze tattoo zemikhono kumadoda